Mapurasitiki ekuwedzera, Plastic Optical Chiedza, Chipenga cheUv Absorber - Kuberekwazve
Nanjing Reborn Nyowani Zvekushandisa Co., Ltd. yakavambwa muna 2018, inyanzvi yekutengesa mapolymer ekuwedzera muChina, kambani iri kuNanjing, mudunhu reJiangsu.
Zvigadzirwa zvinovhara Optical Brightener, UV Absorber, Light Stabilizer, Antioxidant, Nucleating Agent, Pakati nepakati uye zvimwe zvakakosha zvinowedzera. Kunyorera kunyorera: mapurasitiki, kupfeka, pendi, inki, rabha, zvemagetsi nezvimwe.
ZVINODZIDZISWA ZVEMA plastiki
VAKABEREKWA vanosimbirira “Kutarisira kwakanaka kwekutenda. Hunhu hwekutanga, mutengi ndiye akakurisa ”seyakavanzika mutemo, simbisa kuzvivaka wega. Isu R&D zvigadzirwa zvitsva nekushandira pamwe neYunivhesiti, tichichengeta tichivandudza mhando yechigadzirwa uye sevhisi. Nekuvandudza uye kugadzirisa kweye indasitiri yekugadzira indasitiri, kambani yedu zvakare inopa yakakwana kubvunza masevhisi ekuvandudza kwemhiri kwemakungwa uye kubatanidzwa uye kuwanikwa kwemabhizimusi emhando yepamusoro. Panguva imwecheteyo, isu tinotora kunze kwemakemikari ekuwedzera uye mbishi zvinhu mhiri kwemakungwa zvinosangana nezvinodiwa zvemusika wepamba.
Pfupiso yePurasitiki Shanduko Indasitiri
Pfupiso yePurasitiki Shanduko Indasitiri Chirevo uye hunhu hwepurasitiki Injiniya mapurasitiki uye akajairwa mapurasitiki ...
Yekushandisa tarisiro yeo-phenylphenol
Yekushandisa tarisiro yeo-phenylphenol O-phenylphenol (OPP) yakakosha mhando nyowani yezvakanaka zvemakemikari zvigadzirwa uye organic manyowani. Inoshandiswa zvakanyanya muminda ye sterilization, anti-corrosion, kudhinda uye kudhaya auxil ...
Antiseptic uye fungicide yekupfeka
Antiseptic uye fungicide yekupfeka Coatings anosanganisira pigment, filler, color paste, emulsion uye resin, thickener, dispersant, defoamer, leveling mumiriri, firimu-inogadzira mubatsiri, nezvimwe. Izvi zvigadzirwa zvisine hunyoro uye nutrie ...